जेष्ठ ४,२०७९ / ०९ : ०४ अपरान्ह / 2022-05-18 09:04 pm
'नाटकमा पैसा र नाम टन्नै छ । कुरा यत्ति हो सहि स्थान, सहि मान्छे छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरु–सुरुमा त सबै क्षेत्रमा गाह्रो नै हुन्छ नी ।'
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उनले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांगे्रसलाई मात्र होइन अन्य दल र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई समेत तरंगित तुल्याउनुभएको छ ।
हिजो चुनाव लड्ने बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लड्ने एकमात्र नेपाली आफु हो भनेर चुनाव जित्ने आज अन्तर्राष्ट्रिय दाबाबका कारण यस्तो भयो भनेर भन्न कसरी मिल्छ ?
गायक, संगीतकार तथा संगीत प्रशिक्षक मदन गोपालसगँ लकडाउन पछी सन्चालन गरेको अनलाईन संगीत कक्षाको बिषयमा चिनारी पोष्टका लागि डेभिड पाण्डेले गरेको कुराकानी ।
मलाई चाँही नौलो अनुभब खासै केही लागेको छैन् । किन कि म २४ घन्टा एउटै कोठामा बसिराख भने पनि बस्न सक्छु । तर कोठामा लेख–पढ् गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी फिल्म हेर्नको लागि इन्टरनेट र चिया वा कफीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि निजी अस्पतालहरुले खेलेका भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा चिनारीपोस्टका लागि चिरायु नेशनल हस्पिटलका चिकित्सक सहायक प्राध्यापक डा. अमित शर्मा भट्टराई र उप प्रबन्धक रवी खड्कासँग कुराकानी गरेका छौँ ।
डाक्टर रामु खरेल यतिबेला जर्जिया राज्यस्थित एटलान्टाको ग्राडी अस्पतालको इमर्जेन्सी डिपार्टमेण्टमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन्। पब्लिक पब्लिक हेल्थमा मास्टर्स र इमर्जेन्सी मेडिसिनमा एम डी गरेका उनी नेपाली डाक्टर हुन्।